Ahoana ny fomba hampitomboana na hampihenana ny haben'ny sary masina ao MIUI | Androidsis
Xiaomi MIUI dia iray amin'ireo interface indrindra azo adika izay hitantsika. Io dia ahafahantsika manamboatra ny maro amin'ireo safidiny fampisehoana miaraka amina fanitsiana tsotra vitsivitsy, ny iray amin'ireo dia misy ifandraisany amin'ny haben'ny sary masina ao aminy.
Amin'ity fotoana vaovao ity dia manazava zavatra tena tsotra iray izay hahasoa indrindra izahay raha mpampiasa finday Xiaomi na Redmi ary tsy afa-po amin'ny habe voafaritra amin'ny alàlan'ny kisary fampiharana, avy eo mampianatra ny fanovana azy io izahay mba hanandrana azy.
Azonao atao ny manova ny haben'ny sary masina ao amin'ny Xiaomi na Redmi anao
Ity dia zavatra tena tsotra, tena. Mandehana fotsiny any fanahafana hiditra ny faritra amin'ny Sarimihetsika fanombohana, izay hita amin'ny boaty laharana 13 amin'ny ankapobeny. [Mety hahaliana anao izany: Ahoana ny fomba famerana ny angona sy Wi-Fi amin'ireo fampiharana amin'ny Xiaomi na Redmi]
Alohan'ny hitohizanao dia tadidio izany ny mety hanovana ny haben'ny sary masina dia zavatra nampidirina tamin'ny MIUI 11 tamin'ny voalohany. Noho izany, ny telefaona misy MIUI 10 sy ny kinova hafa amin'ilay sosona teo aloha dia tsy manana an'io, raha tsy hoe misy mpandefa launcher (mpandefa) apetraka ary ampandehanana amin'ny finday izay manome an'ity fanahafana ity.
Ankehitriny, efa tafiditra Fandraisana efijery, ao amin'ny boaty laharana 8, izay antsoina hoe Haben'ny kisary, dia eo no tsindrio. Misy ny interface tsotra iray izay ahitantsika bara mitsivalana miaraka amin'ireto fanafohezana manaraka ireto: XS, S, M, L ary XL. Ireo, araka ny efa noheverinao, dia manondro ny haben'ny kisary. Toy izany koa, ny haben'ny savaranon'ireto dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fisehoana izay eo ambonin'ny bara, miorina amin'ny ambaratongan'ny fanitsiana. Farany, mila manaiky ianao aplicar, ny bokotra etsy ambany, raha ampiana ireo fanovana.
Ahoana ny fomba hanampiana lalao ao amin'ny MIUI's Game Turbo function ho an'ny traikefa malefaka kokoa
Raha atao default dia napetraka amin'ny M ny haben'ny kisary, izay mety ho antonony. Raha tsy tianao izany dia azonao atao ny mampitombo na mampihena azy. Izany dia efa tsapan'ny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hampitomboana na hampihenana ny haben'ny sary masina ao MIUI
Ny Coolpad 26 Zhen Tibetan Edition no finday vaovao efa natomboka miaraka amin'ny Snapdragon 710